Lalatiana Andriatongarivo “Mahasoroka ny covid-19 ,tsisy voka-dratsy ny tambavy”
Raha fisorohana ho an’ny ankizy dia 33cl indray mandeha isan’andro, ary in-telo ao anatin’ny herinandro ihany no misotro ho an’ny zaza.
Efa ampy ny fiarovana ao amin’ny tenantsika rehefa mahavita an’izay ary tsy handairan’ny tsimokaretina intsony. Ho an’ny olon-dehibe dia 33CL ampitomboana roa ao anatin’ny iray andro, ary sotroina isan’andro mandritra ny herinandro, hoy ny Minisitry ny serasera Lalatiana Andriatongarivo nandritra ny fizarana ny Covid Organics teny amin’ny CSB II Talatamaty omaly. 7 andro dia tokony ho ampy ny hery fiarovana ka tsy handairan’ilay tsimokaretina intsony. Tsy misy atahorana, tsy misy poizina na “toxicité”, tsy misy vokatra hafa amin’ny vatana na “effet sécondaire” fa ohatran’ny tambavy sotroina isan’andro rehefa marary ireny, hoy izy. Lasa siantifika tanteraka ny mpanao politika, fa ny tena mpikaroka sy mpitsabo no mbola tsy resy lahatra. Tsy arakaraka ny famendrofendroana sy ny fanambaniana ny vokatra Malagasy fa tena liana sy mazoto ny vahoaka Malagasy, hoy ity minisitra ity. Na izany aza dia mbola misy ny olona miahiahy hatramin’ireo mpikaroka ara-pahasalamana, ary tsy tokony hifanomezan-tsiny io kanefa sokajian’ny fitondrana ho tsy fitiavan-tanindrazana ny tsy faharesen-dahatra.